Ungayisho kanjani imali engenayo ye-Adsense | Ezezimali Zomnotho
Okwamanje dala iwebhusayithi yakho noma uhlobo oluthile lwensizakalo eku-inthanethi ungasebenzisa Uhlelo lwe-Adsense lokuthola imali ukubonga okuku-inthanethi ngokuvakashelwa okutholayo kuwebhusayithi yakho, noma kunjalo, isikhathi singafika lapho imali engenayo ukuthi uthola ukubonga ngalolu hlelo kuyabonakala uma ucabanga ukuthi kungenzeka kudingekile ukuyimemezela futhi ukhokhe intela.
Kungenzeka kungabi njalo kuwo wonke umuntu osebenzisa i-Adsense ngoba iningi aliqondi ithrafikhi yezivakashi inkulu ngokwanele ukuba nemali engenayo enkulu, kepha kungahlala kunesikhathi lapho kungenjalo, kanye ne- ithrafikhi yakho yewebhusayithi ikhula kakhulu futhi udinga ukuqala ukucabanga ngalezi zinhlobo zezinkinga. Ngaphambi kokungena enkingeni yokuthi ngabe kudingekile yini ngokuphelele ukumemezela imali oyitholayo ngokuzimela kuwebhusayithi, kufanele sifunde luyini ngempela uhlelo lwe-Adsense, futhi lusebenza kanjani:
1 Yini i-adsense futhi isebenza kanjani?
2 I-Adsense isebenza ngezinyathelo ezintathu ezilula:
3 Ungayibika kanjani imali engenayo yakwa-Adsense
4 Qiniseka ukuthi welulekwa kahle
Yini i-adsense futhi isebenza kanjani?
I-Adsense iyindlela elula nekhululekile yokuthola imali kuwebhusayithi yakho kushicilelwa izikhangiso eziqondiswe kokuqukethwe okuku-inthanethi kwekhasi. I-Adsense ikhombisa izikhangiso zabavakashi bewebhusayithi ezifanele futhi ezikhangayo futhi zingenziwa ngezifiso ukufanisa ukwakhiwa kwewebhusayithi yakho.
Lezi izikhangiso zenziwa futhi zikhokhelwe abakhangisi Yini ofuna ukuyikhangisa? imikhiqizo yakho noma izinsiza kuwebhusayithi futhi bakhokha amanani ahlukene ngohlobo ngalunye lwesikhangiso, futhi nenani lemali abalitholayo lizohluka maqondana nalokhu.
I-Adsense isebenza ngezinyathelo ezintathu ezilula:
Lungiselela izikhangiso zakho ze-banner zewebhusayithi: Lokhu kwenziwa ngokunamathisela ikhodi yesikhangiso lapho ufuna ukuyithumela khona.
Izikhangiso ezikhokha kakhulu yizo ezivela kuwebhusayithi yakho: Abakhangisi bafuna njalo ukuthi bavele ezikhangisweni ezikusayithi nge-auction-time auction, izikhangiso ezinenani eliphakeme kulezi zindali zizovela kuwebhusayithi yakho.
Thola imali: I-Adsense inakekela ama-invoice abo bonke abakhangisi kanye namanethiwekhi esikhangiso avela kumawebhusayithi, bayaqinisekisa ukuthi uthola zonke izinkokhelo ezihambisanayo.
El inqubo yokubhalisa ilula kakhulu, vele uthumele eyodwa isicelo esizeni se-Adsense, bayayibuyekeza futhi bakwazise ngesonto nge-imeyili
Lapho usuvele unomsebenzi obhalisiwe wezomnotho, futhi ubhalisiwe futhi ephezulu kwezokuPhepha koMphakathi futhi unekhasi lewebhu lapho uthathe isinqumo sokusebenzisa i- uhlelo lwe-adsense inqubo ilula. Kwanele ukuxhumana ukuqala komsebenzi owengeziwe kwezomnotho kwi-Agency Agency, nakuMnyango Wezezimali Wokuphepha Komphakathi.
Endabeni UMgcinimafa Wezokuphepha Komphakathi, imali oyitholayo izofana, noma kunjalo, noma ngabe unemisebenzi eyehlukene yezomnotho. Futhi eye Isikhungo Sentela, okuzodingeka ukwenze ukumemezela imali engenayo ngekota nonyaka ebhokisini elihambelanayo lesihloko esisha, ngendlela efanayo, sizokwazisa imininingwane yeklayenti lethu, kulokhu okuzoba yi-Adsense, uma imali yonyaka idlula Ama-euro angama-3,000.
Ukungabaza kuvame ukuvela lapho kwenzeka ukuthi singenayo imisebenzi yezomnotho ebhaliswe ngaphambilini, futhi ake sibe newebhusayithi lapho sisebenzisa khona i-Adsense, kungaba yi-blog, iwebhusayithi, isiteshi se-YouTube, ingosi yokuxhumana nabantu, uchungechunge lwezindaba, phakathi kwabanye; Manje benza imali engenayo enkulu ngezikhangiso ze-Adsense.
Kulokhu kokugcina kufanele sazi ukuthi uhlobo lwenkontileka esisayina nenkampani yakwaGoogle okuyi umnikazi wohlelo lwe-AdsenseKuyinkontileka yabanikezeli bezinsizakalo zokuhweba, lokhu kusho ukuthi kukhona iqembu elithengayo, okuyi-Adsense, elisikhokhelayo, neqembu elithengisayo, okuyilo elisebenzisa iwebhusayithi yethu ukukhangisa.
Ngalokhu okungenhla kuyacaca ukuthi yilokhu uhlobo lomsebenzi wethu wezomnotho omayelana nalo, kungumsebenzi wokukhangisa, ngenxa yalesi sizathu kufanele bhalisa ne-Agency Agency, lapho kufanele sibhalise khona lapho siqala inkontileka yethu neGoogle, okuyilapho siqala khona umsebenzi, kungakhathalekile ukuthi okwamanje asikenzi mali yini.
Adsense, kuzinqubomgomo zalo kumisa njengomthetho ukuthi iqala ukukhiqiza imali engenayo kusukela ngenyanga ngemuva kokukhiqiza u- $ 100 ngenyanga, ngakho-ke okwamanje lapho kufanele senze izimemezelo zekota, ngoba asikaze sizuze mali, isimemezelo sizokwethulwa njengeholo elincane, njengoba siqala ukwenza imali futhi isimemezelo sekota sifika, lapho-ke sizomemezela konke imali ebesinayo ngaleyo kota, njalonjalo ezitatimendeni ezizayo.
Endabeni yeGoogle okhokhayo yi-Google IrelandNgenxa yalokhu, imisebenzi esizoyithola yingoba akuyona inkampani yaseSpain, kepha iyinkampani ye-European Union, lokhu ayikho ngaphansi kwe-VAT. Uma kunjalo kufanele ucubungule ifayela le- ukubhaliswa kwiRegistry ye-Intra-Community Operators ngefomu 036.
Ngemuva kwalokhu sizobe sesenze isibopho sokwethula njalo ngekota, njengoba sishilo ekuqaleni, kumodeli ethile ebizwa nge- Ifomu 303 lokukhokhwa kwe-VAT futhi njalo ngonyaka a isifinyezo ngokusebenzisa imodeli 390. Ngaphezu kokwenza irekhodi lama-invoyisi akhishiwe futhi atholakele, okumele agcinwe okungenani isikhathi esiyiminyaka emine, okuyisimiso se-VAT semikhawulo.
Ngaphandle kwalokhu kubuye kube ngenxa ye- njengamanje ngekota ngayinye nemodeli engu-130 yenkokhelo engxenyeni yeNtela yeNgeniso Yabantu Ngabanye (IRPF), lapho kuzokhonjiswa khona imali etholakala ngokukhangisa, kanye nezindleko ezingakhokhiswa kulowo msebenzi, bese kulomehluko kubalwe ama-20% okuyiwona okumele akhokhwe kuMgcinimafa, bese wenza intela yonyaka ukuqasha.
Kubaluleke kakhulu ukukhumbula ukuthi zonke lezi zitatimende kufanele zenziwe ngaso sonke isikhathi, noma singenalo uhlobo oluthile lwemali engenayo futhi singakhokhisanga noma sichithe noma yini, uma kunjalo ama-akhawunti azofika kuziro, ngeke kube khona ukukhokha, kodwa kufanele zethulwe ngokufanayo.
Futhi uma kwenzeka ukhona ukushaja noma ukukhokhela umhlinzeki othile wangaphandle, okuningi Ama-euro angama-3000 ngonyaka, kufanele wenze imodeli 347, okwenzelwe ukusebenza nabantu besithathu.
Ngokuphepha Komphakathi, indlela umsebenzi wethu wezomnotho ozochazwa ngayo uzoba ngeSitatimende Somsebenzi Oziqashile, lokhu kuchazwa njengomuntu wemvelo noma wezomthetho owenza umsebenzi wezomnotho ojwayele ukwenziwa, oqondene naye ngqo inzuzo.
Kubhaliswe ngale ndlela nezokuphepha komphakathi ngoba umsebenzi wethu wezomnotho uhlala njalo, iwebhusayithi esinayo i-Adsense isesidlangalaleni ngokuqhubekayo, yimpahla yethu eyenza ukuthi ibe ngeyomuntu futhi iqonde, lezi zici zohlobo lwethu lomsebenzi wezomnotho zisenza sifaneleke njenge isisebenzi esizimele.
Njengoba sibhaliswe njengabazisebenzelayo nabezenhlalakahle, izindleko eziphansi zenyanga zizoqala zibe ngama-euro angama-260, kepha-ke, ungakhetha lokho okubizwa ngokuthi yi-flat rate, inqobo nje uma ungabhaliswanga njengomsebenzi ozisebenzelayo iminyaka emihlanu ngenhla futhi ungenabo abasebenzi abangaphansi kwakho. Kulokhu lapho ukhetha isilinganiso esiphansi, izindleko zizoba cishe ngama-euro angama-50 ngenyanga ezinyangeni eziyisithupha zokuqala, ama-euro angama-130 ngenyanga kwezinye ezinye eziyisithupha ezilandelayo, ama-euro angama-189 ngenyanga kwezinye izinyanga eziyisithupha, nokunye okunye okuyisithupha uma ungaphansi kweminyaka engama-30 ubudala, ulandela lokhu ngemali ekhokhwayo ejwayelekile yama-euro angama-260 ngenyanga.
Esinye isimo esingacatshangelwa izindleko zokubhalisa eziphansi kwezokuPhepha Komphakathi ukusebenzela omunye umuntu, uma kunjalo ungakhetha ukwehliswa okungu-50% ku-akhawunti yesisebenzi esizimele, okungaba njalo kubasebenzisi abaningi be-Adsense.
Qiniseka ukuthi welulekwa kahle
Ukuqeda le ndatshana, kufanelekile ukusho ukuthi bangaziswa ngamahemuhemu ahlukahlukene mayelana nokuthi izitatimende kufanele zenziwe kanjani ngokuya ngamacala afana ne-Adsense, njenge, isibonelo, ukuthi Uma umholo omncane ungafinyelelwanga, akudingekile ukubhalisa, lokhu akulona iqiniso ngokuphelele. Ngakho-ke kungcono uzame qaphela ngangokunokwenzeka ngalezi zinkinga futhi kungcono ukushiye ezandleni zikachwepheshe oweluleka ngendlela engcono ngecala lakho, ukuze izinkinga ezingase zisindiswe ngokuzayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Izaziso » Ungayibika kanjani imali engenayo yakwa-Adsense
Ngiyabonga ngokuchaza isihloko kahle kangaka esihlokweni. Kwesinye isikhathi kuba nzima ukwazi ukuthi ungayibika kanjani kahle imali etholakalayo ku-inthanethi.
Ingabe kufanelekile ukuthatha izikhundla ngokuphepha okubizayo?